को Cinque Terre मा पैदल यात्रा इटाली गर्न सबै भन्दा राम्रो कुरा को छ, र सर्वश्रेष्ठ पैदल यात्रा सुरु अंक को एक. यसको पैदल यात्रा ट्रेल्स युरोप सबैभन्दा सुन्दर हुन् र तपाईं आउटडोर प्रेमी वा कसैले भने Decadent बीच केही व्यायाम चाहने इटालियन भोजन, यसलाई इटाली गरेको शानदार रमाइलो गर्न सबैभन्दा इनामदायी तरिका को छ तट.
• एक पटक इटाली, बचत एक ट्रेन को मद्दतले , रेल अझै पनि Cinque Terre पुग्न सबै भन्दा राम्रो तरिका हो. त्यहाँ एक स्थानीय रेल हो, को Cinque Terre एक्सप्रेस रेल, जो बीच तट साथ चल्छ स्टेशन लास्पेजीया र Levanto को Centrale. यो सबै पाँच सहर मा रुक (Monterosso, Corniglia, Vernazza, Manarola, Riomaggiore), र तपाईं क्षेत्र हुनुहुन्छ एक पटक उनलाई बीच सार्न यो लिन आवश्यक छ (तपाईं अक्सर-चुनौतीपूर्ण ट्रेल्स मा पदयात्रा गर्न रोज्न नभएसम्म). गर्मी को रूपमा 2016, को Cinque Terre एक्सप्रेस को लागत छ €4प्रति यात्रा. यस बन्द-मौसममा, सामान्यतया नोभेम्बर मार्च गर्न, लागत गर्न € 1.80 खस्छ. यो रेल सुरक्षित बस्ने प्रस्ताव छैन.
को ईगल वाल्क माथि बनेको छ 23 लिङ्क चरणमा, जो Tirol मार्फत एक सास-लिने मार्ग पछ्याउन. क्षेत्र मा सर्वश्रेष्ठ पैदल यात्रा सुरु अंक, धेरै खण्डहरू सजिलै केबल कार पहुँच गर्न सकिन्छ र पूर्ण रूपमा पूरा- वा आधा- दिन भ्रमण. हामी यो ब्लग को हाम्रो मनपर्ने खण्ड तपाईं परिचय गर्न चाहन्छु.
तपाईं एक दिन पैदल वा एक बहु-हप्ता साहसिक योजना हुनुहुन्छ कि पहाड, तपाईं एक ठूलो हुन ईगल वाल्क पाउनुहुनेछ बाहिरी अनुभव. यो अन्वेषण गर्न अनुपम अवसर प्रदान गर्दछ, अनुभव र प्रकृति जडान.
आधा- नियमित hikers लागि दिन पैदल. तल्लो Inn उपत्यकाका Kramsach देखि, को Sonnwendjoch घर गर्न कुर्सी लिफ्ट लिन. छोटो पैदल को सुखद Zireiner ताल तिर जान्छ, जो लगभग 1,800-मीटर समुद्र स्तर माथि उपत्यकाका स्थित छ - तातो मा शांत गर्न ठूलो स्थान गर्मी महिना. को पैदल Zireiner Alm खर्क जारी (1,698एम) को कुर्सी लिफ्ट को शीर्ष फर्केपछि अघि, तपाईं Inn उपत्यका मा तल फिर्ता सवारी अनुमति.
It’s easy to यात्रा from the UK to रेल द्वारा अस्ट्रिया. तपाईं जान सक्नुहुन्छ लन्डन भियना गर्न, साल्जबर्ग वा एकै दिनमा ईन्न्सब्रक उच्च गतिको रेल. वा lunchtime लिन Eurostar लन्डन बाट ब्रसेल्स गर्न,aThalys high-speed रेल गर्न कोलोन र उत्कृष्ट Nightjet ताजा स्थिति रेल नाइस गर्न, लिन्ज वा भियना रातारात. त्यहाँ एक पटक, Tirol गर्न प्राप्त सार्वजनिक यसको व्यापक नेटवर्क संग सजिलो छ परिवहन. यसलाई रेलका प्रयोग गरेर क्षेत्र वरिपरि यात्रा गर्न सजिलो छ. Hikers भाग वा ईगल वाल्क सबै मा लिन स्थानीय सार्वजनिक परिवहन को उपयोग गरेर प्रत्येक चरण को सुरु र समाप्त अंक पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ इच्छा.
श्रेष्ठ पैदल यात्रा START बुँदाहरू: CAMINO DE SANTIAGO – SPAIN
को कैमिनो सेन्ट जेम्स को बाटो रूपमा अंग्रेजी मा जानिन्छ. All Camino pilgrimage routes lead to Santiago de Compostela as this is where the remains of St James, (सान्टियागो), नवौं शताब्दीमा पत्ता थिए. The pilgrimage was popular in the 10th, 11औं र 12 औं शताब्दीमा र त्यसपछि बिस्तारै लोकप्रियता अस्वीकार.
20 औं शताब्दीमा द्वारा, लगभग कुनै एक मार्गहरू कुनै पनि हिड्ने थियो. Then in the late 1970’s and early 1980’s the route became of interest toafew. They began to write and मार्गहरू नक्शा फेरि.
21 औं शताब्दीमा, एक तिर्थयात्रा को विचार सायद विचित्र छ. तथापि, आधुनिक उपकरणहरू गर्न जडान विच्छेद भइरहेको एक महिनाको लागि पैदल र को exertion बेहद liberating छ.
Sarria तिनीहरू प्रारंभ बिन्दु रूपमा तीर्थयात्रीहरू द्वारा रुचि को कैमिनो डे सान्टियागो मा शहर छ. भन्दा थप 300,000 मा de Compostela सान्टियागो यात्रा कि तीर्थयात्रीहरू 2017, केही 60% को कैमिनो Frances पालना गर्न छान्नुभएको थियो. र अधिक 80,000 तिनीहरूलाई आफ्नो सुरूवात बिन्दु रूपमा Sarria छनौट. Sarria छनौट लागि मुख्य कारण यो आवश्यक तीर्थयात्रीहरू यो Compostela सम्मानित गर्न को लागि न्यूनतम दूरी प्रदान छ (को तिर्थयात्री प्रमाणपत्र). सान्टियागो गर्न दूरी सिर्फ पाँच चरणमा ढाकिएको र एक ठूलो संख्या दावा गर्न सकिन्छ आवास विकल्पहरू र तीर्थयात्रीहरूका लागि सेवाहरू. Sarria देखि सार्वजनिक परिवहन मा प्राप्त गर्न सजिलो छ स्पेन विभिन्न भागहरु.
लुगो देखि, को रेल is also the most comfortable option. Renfe मा लुगो देखि Sarria तपाईं प्राप्त हुनेछ धेरै दैनिक जडानहरू प्रदान गर्दछ 30 मिनेट.
यो Westweg निशान सबै जर्मन लामो-दूरी पैदल यात्रा ट्रेल्स को मूल हो भन्नुभयो गर्न सकिन्छ. यसलाई फिर्ता आफ्नो तरिका को पहिलो नामित बाटो भए 1900. त्यस बेला देखि, को निशान को एक दूरी ढाक्न हुर्किसकेका छ 177 माइल (285 किलोमिटर) — starting in Pforzheim in the north and ending in Basel in the south.
तपाईंको पैदल यात्रा जूता मा राख्नु र केही प्रकृति पैदल यात्रा रमाइलो गर्न तयार? मिनेट भित्र र कुनै अतिरिक्त शुल्क मा आफ्नो रेल बुक एक ट्रेन सेव !
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र बस सक्नुहुन्छ यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन, वा यहाँ क्लिक: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-hiking-start-points/- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#hikes #पैदल यात्रा #Hikingstartingpoints #trails longtrainjourneys trainjourney रेल सुझावहरू